प्रधानमन्त्री ओलीको ‘जङ्गबहादुरको झल्को दिने’ युरोप भ्रमण « Nagarik Khabar
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘जङ्गबहादुरको झल्को दिने’ युरोप भ्रमण
प्रकाशित मिति : 12 June, 2019 6:49 pm
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्याण्ड हुँदै बेलायत र फ्रान्सको साताव्यापी भ्रमणका लागि गत शनिबार निस्केका छन् । नेपालसँग सबैभन्दा पुरानो कुटनैतिक सम्बन्ध रहेको बेलायतलगायतका यी देशहरू नेपालको विकास प्रयासका साझेदार मुलुक हुन् । यद्यपि ती मुलुकमा नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण नभइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले नयाँ आशा जगाएको कुटनैतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन १० मा स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सतवार्षिकीको अवसरमा आयोजना भएको विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गरे । त्यसपछि बेलायत र फ्रान्समा भ्रमणमा निस्के । बेलायतमा रहँदा राजकुमार ह्यारी र समकक्षी टेरेसा मेसँग भेटवार्ता गरेका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा नेपालको शान्तिप्रकृया, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विकास तथा समृद्धिको नेपाली सपनाबारे प्रवचनसमेत दिए ।
१७० वर्षअघि अर्थात् वि.सं.१९०६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत र फ्रान्सको ऐतिहासिक महत्त्वको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। जंगबहादुरको बेलायत यात्रालाई प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर चतुर शासकको सफल कुटनीति भनी अर्थ्याउँछन् । आफ्ना सबै शत्रुहरूको दमन गरिसकेर ढुक्क भएका जंगबहादुरले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण त गरे नै, दुई वर्ष उतै बिताएर युरोपेलीहरूलाई नेपाल र नेपालीका अनौठा आनिबानी देखाए । यसका साथै उनले फर्किँदा कतिपय युरोपेली ‘लिगेसी’ नेपाल भित्र्याए । अंग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ, सम्बत् १९१० को मुलुकी ऐन र गिद्दे प्रेस त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीमा सर्वसत्तावादी चरित्र हावी हुँदै गरेको र नेकपा सत्ता सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको बताइरहँदा १७० वर्षअघिको जंग यात्राकै झल्को दिने गरी भएको यो भ्रमणको संकेतले प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेत र सशंकित हुनु स्वभाविक भएको कांग्रेस नेता होमनाथ दहाल बताउँछन। “भ्रमण हुनु अत्यन्त सराहनीय कदम भए पनि भ्रमणको भावभङ्गीमा चाहिँ अलि असहज देखिन्छ। अर्को जंगबहादुर मैं हुँ मै हुँ भनेजस्तो ।” दहालले टिप्पणी गरे ।
“…अब श्री भगवानको कृपा भया चारधाम पनि गरौंला । हिन्दूस्थान बेलाइत ११ टापुका पातसाहा (बादसाह?)हरूका बेहोरा कार्षाना क्या रहेछ बुझँला । बेहोरा बुझी दोस्त पनि गरौंला भन्या मनसुवा गर्नुभयो ।” आफ्नो बेलायत भ्रमणबारे यसरी उल्लेख गरेका जंगबहादुर राणा तत्कालीन बेलायती महारानी भिक्टोरियाको निमन्त्रणामा त्यता निस्किएका थिए ।
४२ जनाको भ्रमण-दलमा हिन्दू भान्सेसहित पिपलको विरुवा भएको गमला, वर्षौंलाई पुग्ने दाल-चामल, ४० वटा पित्तलका गाग्री र दुहुना गाई-भैंसीसमेत सामेल थिए । म्लेच्छ्हरूको देशमा गएपछि कुनै दोष नलागोस् भन्ने हेतुले त्यसो गरिएको थियो । सम्बत् १९०६ माघ ४ गतेका दिन निस्किएको जंगबहादुर काफिला पानीजहाजमा सवार भै लंका, इजिप्ट, माल्टा र अलेक्जाण्ड्रिया हुँदै चार महिनाको यात्रापछि बेलायत पुगेका थिए ।
जंगबहादुर बेलायत भ्रमणमा निस्किएको यति लामो कालखण्ड गुजारिसक्दासमेत हामी आज कहाँ छौं भन्दा लाज लाग्ने अवस्था विद्यमान छ। राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै सुधार्न नसकिएको हाम्रो सामाजिक अब्यवस्थाको अहिलेको परिप्रेक्षमा शान्त, शालिन र समृद्ध बेलायत-फ्रान्सको स्थिति र अवस्था देख्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कतै रामराज्य यही त हैन भन्ने कौतुहलताले नचिमोट्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । भलै जंगबहादुरको जस्तो त्यहाँको महिमागान गर्नको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नपालीको योजना र सपना त्यहाँ पस्कनु हुनेछ । यो हामी सबैको लागि खुसीकै विषय हो ।
बेलायती समकक्षी टेरेजा मेसँगको भेटवार्तामा गोर्खा सैनिक भर्तीबारे त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनमा छलफल भएको बताइएको छ । हुन त नेपालका प्रायः सबैजसो कम्युनिस्ट घटकहरूले गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्ने मुद्दालाई महत्त्वका साथ उठाउँदै आएका छन् । अर्काको देशको सुरक्षामा जीवन बिताउनु र रगत बगाउनु दासताको सूचक भएको कम्युनिस्ट बुझाइलाई मूर्त रूप दिन अहिलेको शक्तिशाली बामपन्थी सरकार प्रमुखका उक्त भेटवार्ता सबैभन्दा उपयुक्त अवसर भएको बुझाइ छ । तर सत्ताबाहिरको नीति सत्तामा पुग्ना साथ असान्दर्भिक ठहरिने गरेको धेरै दृष्टान्त हामीले देखे भोगेकै कुरा हो।
यस्तै जंगबहादुर राणा बेलायत यात्रापछि फ्रान्सको यात्रामा गए झैं प्रधानमन्त्री ओली पनि बेलायत हुँदै फ्रान्स गएका छन् । २० अप्रिल १९४९ मा कुटनैतिक सम्बन्ध जोडिएको ७० औं वर्षगाँठ पूरा भएको अवसरमा आयोजित हुने विविध स्मरणात्मक कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री सरिक हुने बताइएको छ ।
फ्रान्समा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र फ्रेन्च समकक्षी एडवर्ड चार्ल्स फिलिपसँग द्विपक्षीय हित र सहकार्यको विषयमा छलफल हुनेछ । यस भेटवार्तामा फ्रान्ससँग नेपालले खरिद गर्ने भनिएको स्याटेलाइट र सुरक्षा-मुद्रणबारे छलफल हुनेछ। फ्रान्सको विवादास्पद कम्पनी ‘थेल्स ग्रुप’सँग नेपालले तीन महिनाअघि नै स्याटेलाइट खरिद गर्ने सम्झौता गर्दा नै आलोचना सुरु भएको हो । त्यो अझै थामिएको छैन ।
हातहतियार-खरखजाना तथा अन्तरिक्ष उपकरण निर्माण गर्ने थेल्स ग्रुप सन् २००४ मा विश्व बैंकले कालो सूचीमा सुचिकृत गरेको कम्पनी हो । कम्बोडियाको एक परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विश्व बैंकले ब्ल्याक-लिस्टेड गरेको थियो । यस्तैगरी, भ्रष्टाचार र घुसको मामिलामा थेल्स ग्रुप विरूद्ध दक्षिण अफ्रिकाको एक अदालतमा मुद्दा परेको बीबीसीको अनलाईन संस्करणले जनाएको छ । तथ्यले राम्रो संकेत नगर्दा नगर्दै पनि सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार र प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा अनवश्यक आशंका नगर्न भन्दै पन्छिएका छन् ।
नेपालले फ्रान्सबाट स्याटेलाइट तथा सुरक्षा-मुद्रण खरिद गर्ने विषयमा उठेको चिन्ता नाजायज भने छैन । किनकि पञ्चायती सत्ताको उत्तरार्धको बेला फ्रान्सबाट प्राप्त सोलार जेनेरेटर काम नलाग्ने डम्प माल भएको खुलासा भएको थियो । नेपालका दूरदराजका विमानस्थलहरूमा बिजुलीको सुविधा नपुग्दा एयरपोर्ट सुरक्षा नाजुक थियो । हवाइमार्गद्वारा पेट्रोल ढुवानी गरेर जेनेरेटर द्वारा ऊर्जा संकट हल गर्ने नेपाली काइदा आफैमा जटिल र खतरनाक थियो। यस स्थितिमा मित्रराष्ट्र फ्रान्सले सोलार पावरले चल्ने जेनेरेटर उपलब्ध गराएको थियो । त्यही जेनेरेटर कमसल परेको थियो ।
विकसित राष्ट्रहरूले नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय बजेटबाट निश्चित प्रतिशत रकमको आर्थिक/प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ब्यवस्था रहेको सन्दर्भमा सो सर्त परिपूर्तिकै निम्ति ‘डम्प’ सामग्री लिन मरिहत्ते गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्दछ । अहिले नेपालले खरिद गर्ने भनिएका सामग्रीहरूको सन्दर्भमा समेत सरकारले बिगतको हेक्का राख्न जरूरी छ।
जंगबहादुरले बेलायतबाट गिद्धे प्रेस भित्र्याएका थिए भने अहिलेको शक्तिशाली मानिएका प्रधानमन्त्री ओली फ्रान्सबाट सुरक्षा-मुद्रण मेसिनरी भित्र्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैछन् । हुकुमी मानिएका जंगबहादुरले बरू बेलायती ब्यवस्थाबाट प्रभावित भएर बेलायतबाट फर्किएपछि सम्बत् १९१० मा देशलाई मुलुकी ऐन दिएका थिए । तर जंगबहादुर राणाले बेलायत र फ्रान्स भ्रमण गरेको १७० वर्षपछि बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री ओली उपर प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी राज संकुचित गर्दै अर्को जंगबहादुर बन्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । यो आरोप, आरोप मै सीमित होस् र आशंकाको बादल चिर्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा सम्पन्न होस् भन्ने कामना चाहिँ गर्न सकिन्छ ।
संविधानको अपव्याख्या, कुण्ठामिश्रित आदेश
मोहनसिंह लामा चौँसट्ठी साल तिरको कुरा हो । पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा समावेशीता बारेको जिल्लास्तरीय छलफल